Mpanondrana vato Pumice - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / Mpanondrana vato Pumice
Mpanondrana vato Pumice
Ny pumice dia fitaovana maivana, porous ary abrasive ary nampiasaina nandritra ny taonjato maro tao amin’ny indostrian’ny fanorenana sy ny hatsaran-tarehy ary koa tamin’ny fitsaboana tany am-boalohany.
Izy io koa dia ampiasaina ho toy ny abrasive, indrindra amin’ny famolahana, famafana pensilihazo, ary ny famokarana pataloha jeans voasasa vato. Nampiasaina tamin’ny indostrian’ny fanaovana boky tany am-boalohany koa ny pumice mba hanomanana taratasy hodi-biby sy famatorana hoditra.
Vato Pumice ho an’ny fambolena
Ny vato pumice dia akora lehibe azo ampiasaina amin’ny karazana zavamaniry rehetra. Afaka mitroka rano na zezika mandritra ny fotoana maharitra. Izany dia afaka mitazona ny zavamaniry ho ao anatin’ny hamandoana sahaza nefa tsy manondraka tsy tapaka. Ny vato ampongabendanitra dia manana fiainana lava kokoa raha oharina amin’ny karazana akora fambolena hafa. Azonao atao ny mampiasa vato pumice hanoloana ny tany rehefa mamboly. Izany dia hanampy amin’ny fampihenana ny bibikely sy ny pesticides. Ny vato pumice koa dia manana mineraly maro izay afaka manampy ny zavamaniry hitombo tsara sy ho salama kokoa.
Toromarika: Alohan’ny fampiasana, ny mpampiasa dia tokony handemana vato pumice amin’ny rano. Aorian’izay ny mpampiasa dia afaka mametraka ny vato eo amin’ny fanambanin’ny vilany, afangaro amin’ny tany, na mampiasa vato ampongabendanitra fotsiny mba hambolena toy ny mahazatra. Na dia afaka mitazona ny hamandoana mandritra ny fotoana maharitra aza io vato ampongabendanitra io. Mbola mila manondraka ny zavamaniry tsy tapaka ianao. Azonao atao ny manamarika avy amin’ny lokon’ny vato pumice. Raha maina ilay izy na mihafotsy ny lokony, dia soso-kevitra ny hanondraka ny zavamaniry.
Mineraly ao amin’ny Pumice Stone
Ny vato ampongabendanitra dia noforonina avy amin’ny vato mitsonika ambanin’ny tany na antsoina hoe “lava”. Ity lava ity dia ahitana vatolampy sy mineraly mitsonika ambanin’ny tany. Ny vato pumice dia manana mineraly sy singa maro araka ny aseho amin’ny tabilao etsy ambany.
Ny manganese dia singa ilaina amin’ny enzymes maro. Ireo enzymes ireo dia antsoina hoe “jus gastric”. Raha tsy misy dia mety hisy ratra ny afovoan’ny ravina na ny afovoan’ny hazo.
Ny kalsioma dia ampahany manan-danja amin’ny firafitry ny sela ary manampy ny sela zavamaniry hiasa ara-dalàna.
Ny tombony na calcium amin’ny Pumice
Ny kalsioma dia hanamafy ny fantson-drano sy ny fantsona sakafo ho an’ny zavamaniry. Izany dia mampitombo ny fahombiazan’ny fanaterana rano sy sakafo amin’ny faritra samihafa amin’ny orinasa.
Ny kalsioma dia ampahany manan-danja amin’ny famokarana hormonina mahazatra, toy ny hormones, cytokines, izay manampy amin’ny fanamafisana ny tsimok’aretina. Raha tsy ampy kalsioma ny zavamaniry, dia hihena ihany koa ny hormone ho an’ny zavamaniry ary hiafara amin’ny fihenan’ny felam-boninkazo sy ny fitomboan’ny zavamaniry miadana kokoa.
Ny kalsioma dia manangana rafitra faka matanjaka izay mitroka rano tsara kokoa. Raha tsy ampy kalsioma, dia malemy ny rafitra faka. Mety ho tapaka mora foana ny selan’ny faka ary ho mora kokoa amin’ny fakany ny areti-tany.
Ny kalsioma dia manampy ny rafitra fakany hanohitra ny tany masira.
Ny kalsioma dia manampy ny zavamaniry hanangona nitrate ao anatiny. Izany dia manampy ny zavamaniry hitombo tsara indrindra amin’ny vanim-potoana izay ilain’ny zavamaniry ny nitrate ambony. Tsy hitombo sy hihafohy ny rafi-pototry ny zavamaniry, raha tsy ampy ny calcium. Rehefa maniry fakany vaovao, ny zavamaniry dia mila kalsioma ambony.
Vato Pumice ho an’ny substrate sivana
Ny vato ampongabendanitra dia substrate vaovao azo ampiasaina ho solon’ny haran-dranomasina. Manana endrika spongy izy io fa mateza. Ny vato dia tsy mora vaky toy ny haran-dranomasina ary maharitra ny androm-piainana. Maivana ny vato ampongabendanitra ary mora diovina. Afaka manampy amin’ny fanaraha-maso ny PH ny rano, na ny rano manana PH ambony na ambany, ny vato pumice hifehy ny rano PH ho manodidina ny 7.0. Izany dia hitazona ny rano amin’ny kalitao tsara ary hitondra fahasalamana tsara kokoa ho an’ny trondro tianao.
Torolalana: Noho ny lanjany maivana, ny mpampiasa dia tokony handemana ny vato ampongabendanitra amin’ny rano iray alina alohan’ny hampiasana azy. Izany dia hahatonga ny vato ho afaka hilentika ao amin’ny faritry ny sivana dobo. Raha mila mampiasa azy haingana ianao dia azonao atao ny mametraka zavatra eo ambonin’ny vato mba hanampiana azy hilentika. Rehefa afaka kelikely dia hisintona rano ampy ny vato mba ho afaka hilentika. Mba hanadiovana ny vato ampongabendanitra, ny mpampiasa dia tokony hanadio azy amin’ny rano fa tsy ho maina amin’ny tara-masoandro. Ny hafanana dia hamono ny zavamiaina bitika rehetra manampy amin’ny fanadiovana ny fako trondro.
Vato Pumice ho an’ny indostrian’ny fanasan-damba
Ny vato pumice dia fitaovana ara-tontolo iainana ho an’ny fanasana Denim na fanasana lamba. Rehefa manasa amin’ny vato pumice, dia afaka mamorona lamina miavaka amin’ny denim.
Pumice ho an’ny fanorenana
Ny pumice dia ampiasaina betsaka amin’ny fanaovana simenitra maivana sy insulative ambany hakitroky.
Ny vesicles feno rivotra ao amin’io vatolampy io dia miasa toy ny insulator tsara.
Ny pozzolan dia ampiasaina ho fanampin’ny simenitra ary afangaro amin’ny sokay mba hamoronana simenitra maivana, malama, toy ny plaster.
Efa hatramin’ny andron’ny Romanina no nampiasana io endrika simenitra io.
Nampiasain’ny injeniera romanina izy io mba hanorenana ny dome goavam-be amin’ny Pantheon miaraka amin’ny fatran’ny pumice fanampiny fanampiny amin’ny simenitra ho an’ny toerana avo kokoa amin’ny rafitra.
Nampiasaina matetika koa izy io ho fitaovana fanorenana ho an’ny lakandrano maro.
Ny iray amin’ireo fampiasa lehibe amin’ny pumice amin’izao fotoana izao any Etazonia dia ny famokarana simenitra.
Previous post: Извозник на пемза
Next post: പ്യൂമിസ് സ്റ്റോൺ എക്സ്പോർട്ടർ